1898 (October 17): José de Jesús Fidencio Constantino Síntora mụrụ na Guanajuato, Mexico.
1910-1920: Ntughari Mexico mere.
N'afọ 1917: Iwu obodo Mexico jiri gbochie ike ụka Katọlik.
1924-1928: Plutarco Elias Calles jere ozi dị ka Onyeisi nke Mexico.
1925: Fidencio rutere Espinazo wee malite inweta aha nke onye na-agwọ ọrịa nwere ikike ọrụ ebube.
1926: “Calles Law” nke sitere na Iwu Iwu nke 1917 bụ mbido ntaramahụhụ siri ike megide Chọọchị Roman Katọlik na ndị ụkọchukwu Katọlik.
1926-1929: ndi nchu aja agha na ndi nkiti tinyere nzaghachi nke okpukpe site na nnupu isi nke Crístero.
1927: A kpọrọ Fidencio ka ọ belata ahụhụ ndị ọzọ na-ahụ.
1928 (February 8): Onye isi ala Calles gara Fidencio ruo awa isii maka oge ọgwụgwọ.
1929 (February 18): Fidencio chere ikpe nke obodo Nuevo León maka ịme ọgwụ na-akwadoghị.
1936: Achịbishọp nke Monterrey zigara ndị nnọchianya na Fidencio na-arịọ ka ọ kwụsị inye sacrament ahụ.
1938 (October 19): Niño Fidencio nwụrụ.
1940s: Ọfịs nke la directora na el revisador e guzobere n'ime usoro Fidencia.
1978: E hiwere Center for Fidencist Cultural and Spiritual Studies.
1993: gọọmentị Mexico maara Fidencist Christian Church.
A mụrụ Niño Fidencio José de Jesús Fidencio Constantino Síntora na October 17, 1898 n'obodo Yuriria, Guanajuato, Mexico. Ọ bụ ezie na nkọwa banyere ndụ Fidencio amachaghị nke ọma, na akụkọ ihe mere eme, amụrụ ya n'ime nnukwu ezinụlọ dara ogbenye. A kọwara Fidencio dị ka ezigbo okpukpe dị ka nwatakịrị na “Mgbe ọ dị afọ 8 ọ malitere igosipụta ikike iche echiche pụrụ iche; na-eche echiche, na-eche echiche, ma na-amata ndị ọgbọ ha n'agbanyeghị na ha ekpuchiri anya ha “(Herrera 2012). O mekwara ọgwụgwọ mbụ ya site na iweghachi ogwe aka nke nne ya (Zavaleta 2012: 442). O nwere ike ịbụ na ọ rụrụ ọrụ na osisi Yucatan dị ka nwatakịrị ma jee ozi dị ka nwa nwoke ebe ịchụàjà na chọọchị dị n'ógbè ahụ mgbe ọ laghachiri Guanajuato. Ekwuru na Fidencio nwetara aha ya El Niño, ma ọ bụ nwa nwoke ahụ, n'ihi eziokwu ahụ na ọ na-ejigide olu dị nro, nke dị elu na ihu ụmụaka na omume. Ọzọkwa, a kwenyere na Niño Fidencio agabigaghị mgbe ọ bụ nwata, ọ nọgidere na-enwe mmekọahụ n'enweghị mmepe n'oge ndụ ya niile.
Mgbe ọ bụ nwa akwụkwọ, Fidencio bụ enyi Enrique López de la Fuentes. Enyi enyi nwoke abụọ ahụ mụbara, Fidencio wee malite ịkpọ aka na López de la Fuentes Papa, ma ọ bụ “Papa.” Ọ bụ ezie na Fuentes dị afọ abụọ karịa Fidencio, Fidencio amalitela ịkwanyere ya ùgwù site n'aka nna ya; nke ga-adịgide ndụ ha niile.
Ntughari nke Mexico (1910-1920) na alaghachị ya setịpụrụ ọnọdụ maka Niño Fidencio. Mbibi na ime ihe ike na-eme n'oge agha ahụ na mmekpa ahụ na obi nkoropụ nke fọdụrụnụ mechara hapụ ọtụtụ ndị mba ahụ ka ọ dị ka ndị gbajiri agbaji: n'ụzọ anụ ahụ, n'uche, na mmụọ. Gọọmentị Mexico na Chọọchị Katọlik nọ n'agha ruo afọ iri mgbe agha ahụ bisịrị. A machibidoro ikike na ikike nke Chọọchị na ndị ụkọchukwu iwu n’usoro iwu iwu nke 1917. E mere ka ihe onwunwe nke chọọchị bụrụ nke mba ya ma machibido Churchka ịkatọ gọọmentị n’ụzọ ọ bụla. A tụrụ ndị ụkọchukwu Katọlik mkpọrọ, gbuo ha, ma ọ bụ chụpụ ha na Mexico. Onye isi ala Plutarco Elias Calles, onye isi ala site na 1924-1928, bịara bụrụ onye ama ama maka nkwalite ya maka atụmatụ Katọlik. N’afọ 1926, “Calles Law” kwupụtara ntaramahụhụ siri ike maka ịda iwu megidere iwu obodo. Na ngagharị iwe, Churchka Katọlik gbara abụbọ ọrụ na Mexico; na mba ahụ dum, ndị ụkọchukwu kwụsịrị ọrụ okpukpe. Ọgụ a na-alụso chọọchị na steeti kpatara ọgba aghara ma malite nnupụisi site na 1926 ruo 1929 nke a maara dị ka Nnupụisi Crístero, ọgba aghara nke ndị ụkọchukwu ji egbe na ndị nkịtị. N'ihi ya mba ahụ nọ na ọgba aghara, ọtụtụ na-echere ọnụ ọgụgụ nzọpụta. Okpukpe ahụ chere na a na-emegbu ya; ugbu a enweghi oke ohere ịbata Nzukọ-nsọ ​​yana ọrụ mmekọrịta. Ọ bụ n'oge ọgba aghara a ka El Niño pụtara na Espinazo.
Mgbe e kewapụrụ ya iche ruo ọtụtụ afọ, Fidencio na ezigbo enyi ya nọ na Espinazo, Nuevo León, Mexico na 1925. López de la Fuentes aghọwo onye nchịkwa nke nnukwu ụlọ ahịa nke otu nwoke German nwere aha ya bụ Theodoro Von Wernich. Wernich, onye si mba Germany na-adịbeghị anya, nwere ike ime ka Fidencio gaa Mgbaasị. Ndị mmụọ mgbaasị kwenyere na ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ nwere ike ikwurịta okwu site na mmụọ nke eji anụ ahụ dị ndụ dịka ụgbọala na ngwá ọrụ iji kwurịta okwu. Dika otu oru Fidencista si kwenye na mmuo El Niño na-agwọta site n'iji aru nke onye di ndu, e kwuwo na Von Wernich nwere ike imetuta Fidencio. Ekwenyere ya na ya amawo ikike El Niño dịka onye na-agwọ ọrịa ma gbaa ume na ọganihu ya na mmalite. Ọ bụ ezie na Fidencio weere na ya bụ onye Katọlik ma ọ bụghị Onye Mmụọ Nsọ, Von Wernich kwuru na ọ wusiri ike Fidencio ike na nkwurịta okwu na mpaghara mmụọ nwere ike ịbụ akụkụ dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị. Nkwenkwe a na-ewu ewu ọ bụghị nanị na Fidencistas kamakwa ndị Katọlik ndị ọzọ.
Niño Fidencio n'ike n'ike nwere aha dị ka onye na - agwọ ọrịa (curandero). N'otu afọ ahụ, ọ bịarutere Espinazo, Fidencio malitere ịrụ ọrụ na-ejikọta ya na ndị inyom gụnyere ilekọta ụmụ ọrịa na ụmụ ọhụrụ, na-arụ ọrụ na kichin, na ilekọta ụmụaka mgbe ha na-egosipụta mmasị dị ukwuu ma agwọ ma okpukpe n'okpukpe ya nile. Mgbe otu mwụda na Le Reforma n'afọ mbụ ahụ, Fidencio gwọrọ iri na ise n'ime ndị ahụ lanarịrị (Graziano 2006: 193). Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị mmadụ malitere ịchọta El Niño ma gaa obodo nta nke Espinazo na-atụ anya ọrụ ebube.
Na 1927, Fidencio kọrọ na ọ hụwo ọhụụ nke Jizọs Kraịst na Mmụọ Nsọ pụtara n'ihu ya wee kpọọ ya ka ọ rụọ ọrụ dị nsọ nke inye aka nhụjuanya ndị ọzọ. A kọrọ na ọhụụ a abịawo n'oge enwere olileanya. A tụlere na Fidencio nwere ike ịhapụ ọrụ ya ma ọ bụ ma eleghị anya, Lopez de la Fuente na-ata ya ahụhụ, bụ nke a na-egosi ọtụtụ ugboro na akụkọ banyere akụkọ (Graziano 2006: 193). Dị ka Fidencio si kwuo, ọhụụ ahụ bịara ka ọ nọ na-echegbu onwe ya n'okpuru osisi ose dị nsọ n'obodo ahụ. Osisi ahụ ghọrọ otu n'ime saịtị ndị kachasị nsọ maka ndị na-akwado ya.
Na February 8, 1928, n'agbanyeghị agbụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emegide Catholic, Onye isi Mexico bụ Calles gara Fidencio maka awa isii. Ọtụtụ ndị kwenyere na ọ gara El Niño na akpụkpọ ahụ, na-achọ ọrụ ebube site na ndị nsọ. A sịrị na ọ dọtara Fidencio n'ime ụgbọ okporo ígwè ya na ọbụna na-eyi uwe nke curandero (Mayo nd). Na ihe omume a, ndị na-akpọ Mexico City malitere ịmasị El Niño, mgbasa ya na-arịwanye elu. Ọtụtụ ndị tụgharịrị nleta nke onye nleta ahụ dịka nkwenye nke El Niño na Katọlik ndị Katọlik na-eme na Espinazo ma megide Chọọchị Katọlik nke mba, bụ nke o gosiri n'ụzọ doro anya mmegide ya. N'oge na-adịghị anya ndị akwụkwọ akụkọ Mexico na-akọ na ebe obibi nke ndị na-agwọ ọrịa na-ejikarị ihe karịrị otu narị ọkwá na-arụ ọrụ na ahịhịa ndị na-eme ka ọ ghọọ ahịhịa ọzara, nke na-eme ka ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa. Maka ụfọdụ, ụlọ ndị a anaghị adịru nwa oge dịka ha gaara atụ anya ya. Ọnụ ọgụgụ nke ndị nọ n'ahụhụ na-achọ enyemaka na-etowanye ibu nke na ụfọdụ ga-anọ ebe ahụ ruo izu ma ọ bụ ọnwa tupu ha anata ọgwụgwọ. Espinazo jupụtara na ndị na-arịa ọrịa mkpọnwụ, cancer, syphilis, ekpenta, ọrịa uche, na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Ọtụtụ narị oge laghachitara ọtụtụ puku mmadụ dị ka ọrịa na ịnwụ na-ekpokọta n'obodo nta ahụ. A na-akpọ ebe ha bi bi el campo del dolor, ma ọ bụ ubi nke ihe mgbu (Zavaleta 2009).
El Niño bụ onye a ma ama maka ọnụọgụgwọ ọ rụrụ dịka ọ bụ maka ụzọ ndị dị iche iche a na-esi agwọ ọrịa. Mgbe ọ na-agwọ ọrịa, ndị ọrịa maara nke ọma, ọ dịghịkwa ahụ iru ala ma ọ bụ ọgwụ mgbu e nyere, ma ha ekwughị na o nweghị ihe mgbu. Ngwá ọrụ ya na-abụkarị ndị na-ekwekọghị ekwekọ dị ka usoro ya. Ọ na-ewepụtakwa ọkpụkpọ mgbe nile na iko, ọ ga-agwọ ọrịa mkpọnwụ na nkedo; ọ na-emekarịkwa ka ọ dị ọcha na apịtị na mmiri mmiri ya. Ọ na-eme ka ọgwụ na baths ọ na-enye na-esi n'ọzara na osisi ndị ọ na-anakọta.
Fidencio agafeela tupu ụbọchị iri anọ ya na October 19, 1938. Ọ bụ ezie na ihe kpatara ọnwụ Niño Fidencio adịghị ama, ọtụtụ ndị nọ na-eche na n'ime ma n'èzí nke òtù Fidencista na ike ọgwụgwụ na nri na-edozi ahụ nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ. Ọ malitere ịrịa ọrịa na 1935, ọ bụ ezie na e nweghị nyocha ọ bụla, foto nke ndị nsọ na afọ ikpeazụ ya mere ka ọ daa. Nye ọtụtụ n'ime ndị na-akwado ya bụ ihe ịrịba ama ọzọ nke ịdị nsọ ya; ha na-ekwu na mgbochi nke Mọ Nsọ, nke ga-akwụsị ịkwụsị ahụ ya. A kwenyere na a hụrụ oyiyi nke Kraịst na chest Fidencio na onyinyo nke Virgin nke Guadalupe n'obi ya mgbe ọ nwụsịrị (Graziano 2006: 198).
Tupu El Niño, mpaghara gburugburu Espinazo anọwo n'ụlọ ọtụtụ ndị gara aga curanderos, gụnyere Pedro Rojas, Teresa Urrea, na Nino Juanito (Graziano 2006: 192). Ọ bụ ezie na ndị ọzọ nwetara nchụso, ọ bụ nanị na ọ gara n'ihu inweta ọkwá dị elu nke ndị nsọ. Mgbe a na-ele ya anya dị ka onye nzọpụta nye ndị ogbenye na ndị a na-emegbu onwe ha, El Niño dọtara onye ọ bụla na ikike ọrụ ebube ya. Onye ọ bụla nke na-achọ enyemaka pụọ ​​na nhụjuanya, n'agbanyeghị agbụrụ na njem nke ndụ, chọọ Fidencio. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ndị ahụ ọ gwọrọ nyere ha ọrụ na obodo Espinazo iji gosipụta ekele ha maka ọrụ ebube ya na obodo maka ịchọta ha.
Ọ bụ ezie na Chọọchị Katọlik achọpụtaghị na El Niño Fidencio dịka onye nsọ, ọ bụghị Chọọchị Roman Katọlik kwadoro Fidencio, ndị na-akwado òtù okpukpe Fidencista na-ewere onwe ha Katọlik, dị ka El Niño n'onwe ya. Ya mere ndi ozo dika ndi Katọlik n'ile anya na ndi otu ndi mmadu, ka ha nabata otutu ihe ndi Katolik.
Fidencio n'onwe ya na-ekwukarị na ikike ya nwere ịgwọ ọrịa abụghị nke aka ya, kama o sitere na Chineke ma mee ka o kwe omume site na ụwa na ala ọzara nke ala ọ na-arụ. E nyere ya onyinye ime mmụọ, iji bụrụ ngwá ọrụ nke ike gwọọ Chineke, nye ya n'oge mkpughe Jizọs Kraịst na Mmụọ Nsọ mgbe ọ nọ n'okpuru osisi ose dị nsọ n'etiti Espinazo. Ọ bụ n'akụkụ osisi nsọ a ka Fidencio mesịrị mee ọtụtụ n'ime usoro ọgwụgwọ ọha mmadụ mgbe ndị na-achọ ọrụ ebube gbara ya gburugburu. Ndị a na-agwọ ọrịa ọha na eze na-agba ọsọ ma ehihie na abalị, mgbe mgbe ruo ọtụtụ ụbọchị n'otu oge. E ji mara ndị ọrụ ebube ahụ mara gburugburu ebe ndị dị ndụ dị ka el círculo de curación, ma ọ bụ ebe ịgwọ ọrịa (Zellner 1998: 100).
Curanderos nke Fidencista Christian Church kweere na ha na-eduzi mmụọ El Niño mgbe ha na-agwọ ọrịa. Ha na-eje ozi dị ka ndị na-ajụ ndị mmụọ ase, ma ọ bụ ndị na-agbakwasị ụkwụ n'agbata ógbè nke ndị dị ndụ na ebe ndị mmụọ na-adịghị. Dịka Fidencio si kwuo na ọ bụ site na Mmụọ Nsọ na-eme ka ike Chineke dị site na ya, ndị na-efe ofufe kwere na El Niño na-enye onwe ya aka site na ndị na-ajụ ya. Nkwenye a kwadobere n'echiche nke Fidencio mesiri obi ike na mmụọ ya ga-adịgide ha mgbe ọ gafere ka ndị ọzọ na-agafe ya. Ya mere, ndị kwere ekwe na-ahụ ọrụ ngwọta nke Niño Fidencio ma na-edozi nhụjuanya ka ọ na-aga n'ihu taa site na iji ndị na-ajụ ajụ.
El Niño kwenyesiri ike na ha nwere ike ebube site na nwata. N'ime ndị a, a maara ya karịsịa maka ike ya nke nkwekọrịta. Ọtụtụ ndị kọrọ na ọ maara mgbe onye ọrịa na-adịghị ala ala bịakwutere ya. Ọ ga agwa ha ka ha gaa ma mee ka ha na Chineke dị n'udo, n'ihi na ọ pụghị ime ihe ọ bụla ma kpee ekpere maka ha ma ha na-egbusi oge ha site n'ịchọ ọgwụgwọ (Zellner 1998: 102). Nye ọtụtụ ndị chọrọ ike ya, ahụ El Niño n'onwe ya bụ ọgwụgwọ dị nsọ. Fidencio si otú a nwee ike ịgwọ ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ na-enweghị onye gwọọ onye ọbụla n'otu n'otu. Ngwọta ndị dị otú ahụ gụnyere ngwongwo mkpụrụ nye otu ìgwè nke ndị nọ n'ahụhụ ma ọ bụ Fidencio n'onwe ya na-agabiga otu ìgwè mmadụ, dina n'elu ha ka ha na-ebuli ya elu na ogwe aka ha ịgafe nnọkọ ahụ.
Fidencistas kwenyere na Niño Fidencio nwere ike ịmegharị ahụ ma ọ bụrụ na o nweghị ihe mgbu ma ọ bụ merụọ onye ahụ dara mbà n'ihi na ike nke Mmụọ Nsọ na-agafe ya. O kweere na ya na Chineke dị n'ezigbo mma, ọtụtụ ndị ọ gwọrọ gwakwara na ya na Kraịst na Virgin ahụ ga-ezute nzuzo n'ụtụtụ na Cerro de la Campana (Graciano 2006: 195).
Mgbe a na-agwọ ọrịa, e kwuru na ndị nsọ ahụ gosipụtara ka ha banye n'ọhụ mmụọ. O kwuru na ya na Nna nke Eluigwe na-enwe mmekọrịta, onye esitere n'aka ya mee ka ike gwọọ ya. E nyere ya ike a na osisi ose dị nsọ nke Espinazo site n'aka Kraịst na Mmụọ Nsọ. Mgbe El Niño banyere na mmụọ nke mmụọ, ahụ ya mgbe ụfọdụ na-adị ndụ ka ọ na-aga n'ụzọ ime mmụọ gaa ebe ndị ọzọ ma ọ bụ ahụ.
Ọtụtụ ndị akọwala El Niño dị ka ọnụ ọgụgụ Kraịst ma ọ bụ ọbụna nsị nke Ọkpara ahụ n'onwe ya. Foto ya na-egosi na ọ dị n'akụkụ ihe oyiyi nke Jizọs n'ebe ịchụàjà. Ụdị na ọkwa a dị otú a emeela ka ọtụtụ ndị chee na ndị nsọ dịka Mezaịa Mexico. Nkọwa nke ndụ Fidencio na-ekwukarị ma ọ bụ na-eme ka ọ dị ka Kraịst. Dịka ọmụmaatụ, akụkọ ọdịnala na-ekwu na ọ nwụrụ mgbe ọ dị afọ 33, dịka Kraist, kama karịa 40. Dịka Jisos, a maara Fidencio maka ikike ọgwụgwọ ya na ọrụ ya n'etiti ndị ogbenye ma mebie ya. Ndị ekpenta, ndị na-adịghị ahụkebe, ndị ngwụrọ, ndị ìsì, ndị ogbi, ndị na-anwụ anwụ, na ọtụtụ ndị ọzọ jupụtara na Espinazo iji hụ El Niño ka o wee nwee ike inye ha ahụhụ ha na-ata ahụhụ. Dị ka ihe atụ Mesaịa, Fidencio bịara nyere ndị mmadụ aka n'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe. Mgbanwe nke Mexico (1910-1920) agafebeghị, onyeisi oche nke Mexico, Calles, na-agbalị ịchụpụ mba nke Roman Catholic Church. A makwaara Fidencio maka ibi ndụ nke ndụ. O kwuru na o riri ma ọ bụ ṅụọ obere ihe. Mgbe o riri ihe ọ bụla ọ na-abụkarị mmiri mmiri. N'agbanyeghi ihe oriri a, Fidencio amaghi ike ma obu enweghi ike, obuna mgbe o na-aru oru n'enweghi nsogbu ruo otutu ubochi na abali. O yiri ike nke ume na-agwụ agwụ mejupụtara akụkọ akụkọ banyere ndị nsọ dị iche iche ma gbakwunye ya na-ewuwanye ewu n'etiti ndị nọ n'ahụhụ.
N'oge ọ dị elu na 1920, ndị nnọchianya ndị South America na-aga Fidencio ma mata na ọ bụ nnukwu shaman (Zavaleta 2005). Dị ka nkwenkwe a ma ama, Pope ahụ kwadoro El Niño site na Vatican maka ọrụ nsọ Ya (Graziano 2006: 191).
N'oge ndụ El Niño, a na-emekarị ememe ọgwụgwọ na Cerro de la Campana, nke a maara dịka ebe dị nsọ, na Rancho Puerto Blanco, ebe ndị na-akwado ya nwere ike iji
mmiri nke Charco Azul maka ihe ngwọta ya. Emere ọtụtụ ememe ememe n'ebe ahụ. Fidencio siri ọnwụ na ọ ga-enye ndị nọ n'ahụhụ ọnọdụ obi ụtọ, ya mere, e nwere egwú, ịgba egwú, ọchị, na ihe nkiri. El Niño onwe ya ji abụ obi na-abụ abụ mgbe ọ gwọrọ. Ọ dịghị ebubo ego maka ọrụ ngwọta ya.
A na - ekwu na ọ bụ na El Niño na - amalite ịmalite afọ abụọ tupu ya anwụọ ya na ndị ya na ya dị nso, gụnyere Damiana Martínez na Victor Zapata, bụ ndị ndú ndị njem n'oge ahụ. Mgbe ndị na-ihe omuma) nyere mmụọ nke Fidencio maka emume ọgwụgwọ, ha na-akọ na ha nọ "ọnọdụ ịbụ" dị iche ma ọ bụ na ha enweghị uche ma ọ bụ mara maka omume ahụ ha mgbe ọ nọ na njikwa El Niño. Ebe ọ bụ na Fidencistas na-ewere onwe ha dị ka ndị Roman Katọlik, ọ na-abụkarị ịmekọrịta omenala na njikọta na oke. N'otu oge, dịka ọmụmaatụ, mgbe emechara Mass ahụ, ọgbakọ ahụ kpere ekpere maka mbata nke mmụọ El Niño (Haelle 2011). Mgbe ahụ Materia Criselda Valencia yiri “uwe mwụda na-acha ọcha na okpu na-acha uhie uhie, olu ya na-ada nke ọma, omume ya na-agbanwe nke ukwuu.” Mgbe mmụọ Fidencio hapụrụ ahụ ya na mmata ha laghachi, a ga-agwa ha ihe El Niño kwuru ma mee mgbe ọ nọ, dị ka a ga-asị na ha nọ n'ụra n'oge ememe ahụ. Mgbe ọ laghachiri na steeti nkịtị, Criselda nọrọ “ụbọchị niile nke ụbọchị ahụ na-efe ọtụtụ ndị bịara n'ụlọ maka enyemaka na isi ọwụwa, nweta nkwalite na ọrụ, ịtụrụ ime nwa, ehighị ụra nke ọma, na ọnọdụ ndị ka njọ” (Haelle 2011) .
Ndị na-eso ụzọ Niño Fidencio jụrụ ikwe ka ihe ndị fọdụrụ na ndị nsọ ha na-aga n'ebe ili ozu mgbe ọ nwụsịrị. Ya mere, El Niño ka etinyere aru ya, na-ekebe ili-ulo chi. Espinazo ghọrọ ebe njem maka ndị na-achọ ọrụ ebube site n'ahụ ndị mmadụ dị nsọ ọbụna mgbe ọ nwụsịrị. A na-achọ ọkara ala El Niño iji mee njem nlegharị anya na ụlọ nsọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ; Otú ọ dị, ọtụtụ na-eme ya mgbe mgbe. Espinazo ọbụna abịa na-akpọ dị ka Tierra Santa, ma ọ bụ Ala Nsọ ahụ, site n'aka ọtụtụ.
Pilgrimages ka Espinazo na-amalitekarị na otu n'ime ọtụtụ narị arụsị ndị a raara nye El Niño na Mexico ma ọ bụ United States. Site na ndị a tronos , n'ụzọ nkịtị "ocheeze," otu ìgwè nke ndị na-efe ofufe na-edu onye na-ajụ ndị mmụọ nsọ nke ili-arụsị, ha niile bụ ndị a maara dịka ozi. Ememe Fidencio na-eme na Machị na Ọktọba na Espinazo; ndị ọzọ na-eme njem njem ala ha oge ụfọdụ oge ndị a. Mgbe ha rutere Espinazo, ha gara leta osisi ose dị nsọ, bụ nke ha na-atụgharị ugboro atọ na-enweghị atụ mgbe ha na-enye ekele maka njem ha dị mma. A na-eme ọtụtụ ọgwụgwọ n'ebe a dị nsọ nke ọhụụ El Niño. Ụzọ njem elu site na osisi ose gaa n'ili ili Fidencio-ụlọ nsọ bụ ndị ọtụtụ mara dị ka Ụzọ nke Penance. Mgbe ọ nọ n'okporo ụzọ nke Penance ọtụtụ ndị na-agbaso nkwa na-eme nkwa ndị e nyere ndị nsọ ma ọ bụ kwe nkwa ịkwụ ụgwọ ụgwọ n'ọdịnihu iji kwụọ ụgwọ ọrụ ebube na nkwa ma ọ bụ na-enwe olileanya ịnweta ihe a rịọrọ. Ọ bụ ezie na njem njem n'obodo ahụ bụ ugwo n'onwe ya, ndị na-adọrọ ihe na-enyekarị àjà ndị ọzọ n'okporo ụzọ a. Ọtụtụ na-ebu obe; na-agbada n'ikpere ha, azụ, ma ọ bụ afọ; ma ọ bụ tụgharịa elu na ájá. Udi ahụ n'onwe ya bụ ebe a na-agwọ ọrịa, mgbakọ ozi, mmemme maka El Niño, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'oge ememe. Atop n'ili ahụ na-anọdụ n'ofere mmiri, nke ekwenyere na mmụọ El Niño ga-enye ya. Site na imetụ ma ọ bụ ingesting mmiri nsọ a, ndị nwere ike ịsacha ma gwọọ ha, ha na-enweta ngọzi nke ndị nsọ. N'akụkụ ili ahụ bụ nzọụkwụ Fidencio. Ndị na-agbaso ụkwụ na-etinye ụkwụ ha n'elu ya, na-anọchi anya ije ije na nzọụkwụ ya, ịbịaru nso El Niño (Graziano 2006: 211). Onye ọ bụla ozi nwere ụdị na ụdị ya, ya mere enwere ọtụtụ iche iche n'oge ememe. Onye ọ bụla na-asọpụrụ El Niño; a na - eji usoro ịgba egwú eji egwu egwu na ejiji, na akụkọ banyere ọgwụgwọ a ma ama nke Fidencio dị ka abụ.
A na-eme ihe dị iche iche na ụlọ nsọ na onyinyo nke onye a kpọgidere n'obe Jizọs na-elekọta. N'ebe mgbede nke Eucharist, ndị na-esonye na-ekere òkè n'ịkekọrịta achịcha ahụ. Ndị ụkọchukwu na-eme ihe ncheta nke baptism, nkwenye, alụmdi na nwunye, na njedebe dị oke njọ. Enweghị nkwupụta; a gbara onye ume ka ya na Chineke kwurịta okwu.
A na-emekarị ememe na-agwọ ọrịa na ọdọ mmiri mmiri mmiri a maara dịka chaquito na Espinazo. Ọ na-enyefe mmụọ nke El Niño na-efe efe na mmiri mmiri dị ka Fidencio mere n'oge ndụ ya. Cerro de la Campana na Dicha de La Santa Cruz, ebe ndị ọzọ a ma ama na-agwọ ọrịa na El Niño, na-ewu ewu n'oge ememme ndị a.
Fidencio echeghị ka a mata onye nwụrụ anwụ dịka onye nsọ. N'oge ndụ ya, ndị mmadụ amalitelarị ịsọpụrụ ya dịka ndị nsọ dị ndụ. Ndị na-ebipụta akwụkwọ na-ekere òkè dị ukwuu n'ịgbasa akụkọ banyere ọgwụgwọ nke currandero, na nke kawanyewanye ukwuu n'ịkwalite akụkọ ifo El Niño. Ọ bụghị nanị na ndị na-ede akụkọ ahụ kwalitere aha ya na Mexico ma ha gbasakwara ọmarịcha ọrụ ebube na United States na Europe. N'ezie, a na-achọta ndị na-ajụ mmụọ na ndị nsọ na obodo ọ bụla Latino dị na United States (Zavaleta 2012).
E mere mgbalị iji hazie ije mgbe Fidencio nwụsịrị na 1938. Ndị a na-ewere dị ka ndị na-enyere ya aka ka a na-asọpụrụ dị ka ndị na-eso ụzọ. Ọnọdụ nke la directora, onye nduzi, e kere ya na mbụ ya site Damiana Martínez. Martínez ghọkwara onye a maara dị ka olu bụ isi, isi vocina, nke El Niño n'ụwa ma kpọọ ya onye ndu nke mmegharị ahụ. A họpụtara Victor Zapata ọrụ ịkatọ “olu ụgha,” ndị na-eme nanị ka hà na-enweta mmụọ nke El Niño. Isi nchegbu bụ mbibi nke ndị na-azọrọ na ịlọ ụwa nke Fidencio n'onwe ya. Ọrụ ndị ọ nyere mechara bụrụ ọnọdụ nhazi, el revisador, ma ọ bụ onye isi nchịkwa, ọ bụ ezie na ọ bụghị ruo ọtụtụ afọ. Mgbe ọnwụ Zapata, nwa ya nwanyị, Panita (ma ọ bụ Ciprianita) weere nlekọta nke ndị na-ajụ ase. Ụkpụrụ dị otú ahụ mesịrị mee ka nkewa ghọọ òtù ndị na-amaokwu n'ihi na revisadorNkwenye ma ọ bụ nkwenye nke ụfọdụ ndị na-ajụ ase. Mgbalị a na-eme ka mmegharị ahụ dị ọcha mepụtara nkewa n'etiti “ndị oke” enwetara nyocha na ndị ọzọ enyeghị nkwado dị etu ahụ. Panita ghọrọ onye ndu nke ndị na-azọrọ na ha sitere n'okike nke mmụọ, n'ihi na a na-ele nna ya anya dị ka onye na-eso ụzọ El Niño. Nwa ada Fidencio bụ enyi ogologo ndụ Lopez de la Fuente, Fabiola, ghọrọ onye isi nke otu nke abụọ. Secttù a na-ekwu na ọ bụ ezinụlọ dị ka Fidencio lere nna Fabiola anya nna ya.
Fabiola na di ya, bụ Heliodoro, na-achọ ịhazi usoro ahụ. Na March 1978, ha tọrọ ntọala Ụlọ Akwụkwọ Maka Ọmụmụ Nkwekọrita na omenala Fidencist. Ha choro ime ka ndi otu ndi otu ha gaa n'ime ulo uka. Na June, 1993, Iglesia Fidencista Cristiana, Chọọchị Fidencist, bụ ndị ọchịchị Mexico.
Ndị ndu duziri nke ọma iji cheta ma dekọọ ozi anatara site na Niño Fidencio. Ekwesiri itinye ozi ndị a na ebe nchekwa, dị ka ọdịnala ọnụ ruo ogologo oge, n'ihi ọkwa amaghị akwụkwọ nke 1930 na 1940 nke ime obodo Mexico. N'ime ozi ime mmụọ ndị ae nwetara na El Niño, ihe dị ka otu narị "akụkụ Akwụkwọ Nsọ" na-adị ndụ taa. Iji akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a (escrituras), ndị na-akwado oge mbụ nwere ike ịmepụta ntọala nwere ike ịhazi nzukọ ahụ (Zellner 1998: 110).
Ndị inyom na-eje ozi dị ka ndị isi na-ajụ ihe, ma ọ bụ cajitas (nke bu "obere igbe" nke El Niño's spirit), na otutu ihe omuma; ihe kachasị mkpa ha na-eso na-eso Fidencio mgbe ọ nwụsịrị. Ọ bụ ezie na ikike nke ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ site na ọrụ a bụ site n'inweta nwoke, njirimara nke Fidencio n'oge ndụ ya na-enye ohere maka nchịkọta nke nwoke na nwanyị ma mee ka a mata ikike nwanyi. Nke a bụ otu n'ime ọrụ ime mmụọ ole na ole na Mexico ebe e nyere ụmụ nwanyị ikike iri nri. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ajụ onwe ha amụbawo nwayọọ nwayọọ na afọ ndị na-adịbeghị anya, ma nkewa ahụ ka dị oke. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke chere na o yikarịghị ka ha ga-enwe ikike mgbanwe, a na-aghọta ikike dị otú ahụ ka ọ bụrụ ụmụ nwoke dịkwuo irè. N'agbanyeghị echiche ọ bụla nke nwoke ịbụ onye ka elu, ọtụtụ ndị inyom na-arụ ọrụ ime mmụọ ndị a na-ekewapụ usoro ahụ site n'aka ndị nna ochie nke Chọọchị Katọlik.
E guzobere ozi ọma n'ime obodo na obodo nta ndị dị nso na Espinazo. Ikebịghike, kpukpru obio Mexico ke edem edere ekedi ufọk Fidencistas na ọrụ ha. Ka ndị ọrụ si mba ọzọ kwaga United States, ha ejiriwo nkwenkwe ha bịa. Ndị kwabatara na-asọpụrụ El Niño dị ka ndị nsọ na-ewetara ha akụkọ banyere ọrụ ebube ha curandero na ha. Mpaghara ebe ọtụtụ ndị ọrụ si mba ọzọ na-eme njem gụnyere Texas, Colorado, Oregon, Indiana, Michigan, Ohio, na Washingon. Onye niile biara Tinye ozi. Ịga nke ọma na ọrụ ndị a dabeere na mmepe nke onyinye ime mmụọ, ma ọ bụ Don, site n'aka otu onye otu na mmepe nke ndị ọgbọ ọhụrụ. Na 1940s na 1950s ọfịs nke la directora na el revisador ghọrọ ntọala nhazi nke Tinye agbagharị, na-eje ozi dịka olu El Niño na onye na-akwalite ozi ya. Site na 1970, usoro ahụ amalitewo n'ụzọ zuru ezu n'usoro ọmụmụ ya, ihe ọkụkụ dị iche iche, na ọtụtụ ọrụ arụ ọrụ.
Ọtụtụ n'ime ụmụazụ El Nino ewerewo onwe ha dịka ndị na-akwado ndị nsọ kemgbe ha bụ nwata. Okwukwe ha, na nke ezinụlọ ha, na omenala Roman Katọlik dị nnọọ ka okwukwe ha na Niño Fidencio. Okpukpe Fidencio adịghị ka ọ dị njọ na oge ochie. Ọ nọgidere na-eto n'ike n'ike. Ọtụtụ puku ndị na-akwado Niño Fidencio anaghị edozi ha n'ime obodo ndị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-agwọ ụlọ nsọ. Ọkara dị iche iche na-eje ozi dịka ndị ndụmọdụ yana ndị na-agwọ ọrịa. Ya mere, ndị na-akwado mmadụ na-enweta ọtụtụ uru na ahụ, n'uche, na n'ụzọ ime mmụọ.
El Niño Fidencio na ngagharị ọ malitere nwere ọtụtụ isi mmalite nke nguzogide: Ndị ọrụ ahụike e guzobere ekwuola na usoro ọgwụgwọ ya mebiri ọrụ ọkachamara ha; Fidencistas enwewo nguzogide na-aga n'ihu site n'aka ndị isi ụka Roman Katọlik n'okwu gbasara omume na omume Fidencio; na Ficencistas ehiwela ọgbakọ ịrọ òtù.
A kọrọ na agwọ ọrịa El Niño na-emebi ndị dọkịta na ndị ọgwụ ọjọọ nke Northern Mexico na akwụkwọ akụkọ na February, 1928. Akụkọ ndị na-akọ akụkọ na-ekwu na ntụgharị nke ndị ọrịa site na ọrụ ahụike ziri ezi na nke Fidencio bụ kpatara nsogbu ego siri ike maka ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ahụike. Na February 18 nke afọ na-esonụ, Fidencio nwere ihe iwu kwadoro megide ya. Ala nke Nuevo León boro ya ebubo na ọ na-eme ọgwụ na-akwadoghị. N'ihi nke a, Fidencio nọgidere na-enyocha nlezianya maka oge ndụ ya niile, ndị ọrụ gọọmentị na-akatọ ya mgbe nile banyere ahụike na ọgwụ. E jidere ya ugboro abụọ na ebubo ndị yiri ya. Nkwupụta a na-ezighị ezi mere ka Chọọchị Roman Katọlik kpapụ anya site na El Niño (Graziano 2006: 197). Chọọchị anọworị na-etinye aka na mgbagwoju anya na gọọmentị ma achọghị ịnye ihe ndị ọzọ kpatara enweghị ntụkwasị obi nke gọọmentị na Chọọchị.
Esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ ahụ ike na-ahụ maka ahụ ike na ụlọ ọrụ Fidencio mere ka nkwenkwe a ma ama na ọnwụ ndị mmadụ dị ka onye e gburu egbu nke ndị dọkịta na-emegide ya. Ọtụtụ n'ime ndị na-akwado ya kwenyere na mgbe El Niño nọ na ntụgharị uche, nke nọrọ ụbọchị atọ, ndị dọkịta were ohere ịkwusa ọnwụ nke curandero , dị ka ozu ya dị ndụ, ma na-arụ ọrụ autopsy. A kwenyere na ndị dọkịta malitere ịmịkọlọtọ site n'ime ka mgbu ya kwụsị. Ọbara dị ọkụ gbapụtara, na-egosi na ọ dịla ndụ. A kọọrọ ndị dọkịta na ha anwụọla obere oge. Echiche mara mma banyere El Niño na ndị dọkịta na-egbu ya bụ ihe si na foto nke onye ọrịa na-agwọ ọrịa nke okwukwe na ndị dọkịta abụọ na-enyocha ọnya olu.
Esemokwu dị n'etiti Fidencistas na Chọọchị Roman Katọlik. Ọ bụ ezie na ndị na-adọrọ mmasị na Niño Fidencio na-agbaso ihe ndị bụ isi nke Roman Katọlik ma na-ewere onwe ha ndị Katọlik, Fidencio abụghị onye nsọ nke Chọọchị Roman Katọlik mara. Ebe ọ bụ na Roman Katọlik na-amachibido ịsọpụrụ onye ọ bụla a na-agbanyeghị ma ọ bụ nke a na-akwanyere ùgwù, nkwanye ùgwù nke Fidencio nwere nkụda mmụọ. Site n'aka onye Roman Catholic, Fidencismo na-atụgharị anya na-elekwasị anya n'ebe Jizọs Kraịst nọ na ihu ọma nke Mezaịa Mexico, kweere na ọtụtụ ndị ịbụ nlọghachi nke Kraịst n'onwe ya. Nkwenkwe a na Fidencio dịka nlọghachị nke Kraịst malitere n'akụkụ ụfọdụ site na ọrụ ya dịka Kraịst na mmeghachi nkwupụta ọ bụla kwa afọ na-enwe banyere Oké Mmasị n'oge Izu Ike. Malite na njedebe nke 1920, a bịara mara ya dịka "Kraịst nke Espinazo." Fidencistas ejikwala ngosi ngosi nke Virgin nke Guadalupe site na ihe oyiyi a ma ama El Niño Guadalupano, nke a gbanwere Fidencio maka Virgin. Nkwupụta Fidencio na ntinye mmụọ, nke na-arụ ọrụ dị ka akụkụ bụ isi nke mmegharị ahụ, emeela ka esemokwu dị na Chọọchị ka njọ. Otú ọ dị, ọjụjụ Fidencio na ndị isi Roman Katọlik egbochighị ịnụ ọkụ n'obi Fidencista: “Ọ bụ onye nsọ ha, ụka ma ọ bụ enweghị ụka; n'ezie, ụfọdụ na-ekwupụta na ọ bụ onye guzobere okpukpe ọhụrụ, Katọlik nke Mexico n'ezie "(George 2011).
Esemokwu nke abụọ site n'echiche ndị isi Roman Katọlik bụ nchịkwa Fidencio nke sacrament na-enweghị uru ọ bụla. Ọ bụ ezie na dị ka nkà mmụta okpukpe Katọlik Fidencio enweghị ikike ma ọ bụ nwee ike ịme sacrament ahụ n'ezie, obere obodo Espinazo enweghị onye ụkọchukwu nke ya. El Niño weghaara onwe ya iji jide n'aka na onye ọ bụla natara sacrament ndị dị nsọ. O mere baptism na nkwenye, gee ntị na nkwupụta, nye udo, lụọ di na nwunye, ma mee emume ikpeazu, isii n'ime sacrament asaa na Chọọchị Katọlik. A kọrọ na achịbishọp nke Monterrey zigara ndị nnọchi anya ka ha gaa Fidencio na 1936 rịọ ka ọ kwụsị ịhazi sacrament n'ihi na ọ bụghị ụkọchukwu echichi. Fidencio kwetara na archbishop na arịrịọ ya mana n'oge na-adịghị anya ọ maliteghachiri inye ndị nhụjuanya nke anụ ahụ na nke mmetụta uche bụ ndị bịakwutere ya.
Esemokwu dị n'etiti Fidencistas na Chọọchị Roman Katọlik mesịrị duga Fidencistas n'ụzọ na-apụnahụ
Chọọchị ahụ. Na mberede, na ọkwa ya dị ka ụlọ ọrụ ya site na ọchịchị Mexico nyere nkwado dị mma nye Chọọchị Fidencist na 1993. Ndị isi chọọchị Katọlik azaghachila site na igbochi Fidencista si na chọọchị ha. Ndị Catechist nọ n'ebe a na-amata ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke Fidencitas na-adị ndụ na-enyekarị ntụziaka ụfọdụ banyere otu esi eme ka ọgbakọ ha dị ọcha na nkwenkwe El Niño na ememme. N'agbanyeghi iwu a siri ike, ụfọdụ ndị ụkọchukwu ndị parish na-enwekwu obi ụtọ n'ihe gbasara ofufe mmadụ (Hopgood 2005: 109).
Burbank, James. 1997. "Ndị Katọlik, Too, Na-asọpụrụ El Nino Fidencio." National Catholic Reporter Online. Nweta site na http://www.questia.com/library/1G1-19121734/catholics-too-venerate-el-nino-fidencio on 24 February 2013.
George, Ron. 2011. "El Nino Fidencio: Onye na-agwọ ọrịa na-aghọ Chineke." Nweta site na http://pelicandiaries.wordpress.com/2011/03/28/el-nino-fidencio-a-healer-becoming-god/ na 27 February 2013.
Graziano, Frank. 2006. ”Niño Fidencio.” Okpukpe nke Devotion: Saints Folk of Spanish America. New York: Oxford University Press.
Haelle, Tara. 2011. ”Mmụọ ọgwụgwọ nke El Niño Fidencio.” Kọ akụkọ Texas, Mee 31. Nweta site na http://reportingtexas.com/the-healing-spirit-of-el-nino-fidencio/ on 15
Hopgood, 2005. Ime Ndị Nsọ. Tuscaloosa, AL: Mahadum Alabama Press.
Mayo, CM nd “Gịnị Bụ Àgwà nke Chọọchị Katọlik banyere mgbaasị?” Akwụkwọ Mmụọ Nsọ. Nweta site na http://www.cmmayo.com/SPIRITISTMANUAL/Spiritist-Q-AND-A/5-NINO-FIDENCIO.html na 24 February 2013.
Murray, William B. "Mmụọ nke Ala Nsọ." Ime Ndị Senti: Ebe Nsọ Na-eme Ihe Na-eme. Ed. James F. Hopgood. Tuscaloosa: Mahadum Alabama, 2005. Nne. Bipute.
Salinas, Alberto, na Lydia P. Salinas. nd “Ekpere Fidencio Sintora Constantino.” El Nino Fidencio Ahụmahụ Ọgwụgwọ Ime Mmụọ. Nweta site na http://elninofidencio.com/prayers.html na 24 February 2013.
Torres, Eliseo. 2004. "El Nino Fidencio." Nweta site na http://www.unm.edu/~cheo/ElNino.htm na 24 February 2013.
Zavaleta, Antonio. 2012. "El Niño Fidencio." Pp. 441-49 n'ime Na-eme ememe Latino Folklore, nke María Harrera-Sobek dere. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
Zavaleta, Antonio, Alberto Salinas, na Jamie Sams. 2009. Mkparịta ụka Curandero: El Niño Fidencio, Shamanism and Traditional Traditions of the Borderlands. Bloomington, IN: AuthorHouse.
Zellner, William W. na Marc Petrowsky. 1998. "El Nino Fidencio na Fidencistas." Pp. 95-116 na Ndi otu, ndi otu nwoke, na ndi ime mmuo. Westport, CT: Onye nlekọta.
NKANWEE NDỊ VIDIO NA NIDA